Mudalab Ilaa Maamule Shirkadeed (CEO) | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya 1991-kii, ee ay xoogaggii ka soo horjeeday ee SNM la wareegeen gacan ku haynta gobolladii waqooyi, ee ay dhaceen dagaalladii sokeeye ee kala danbeeyay. Carrigan Somaliland wuxuu noqday dal gebi ahaanba la burburiyey oo si cadowtinnimo qorshaysan ah loo xaalufiyey intiisii badnayd. Waxaana dadkii dalka dib ugu soo noqdeen iyadoo dhammaanba magaalooyinkii waaweynaa ee ay dadku deggenaan jireen, sida Hargeysa, Burco, Berbera, Ceerigaabo. Inta badan la burburiyey oo dhulka lala simay. Waxa lagu soo noqday iyadoo magaalooyinkaa iyo kuwo kale oo badanba ay yar tahay guri keliya oo saqaf lahaa ama ay jiingadi saarnayd. Sidoo kale, waxa la baabbi’iyey oo xididdada loo saaray adeegyo badan iyo waxyaalo badan oo lagamamaarmaan u ahaa nolosha bini-aadamka. Waxa la burburiyay ama la bililiqaystay in badan kaabayaashii muhiimka u ahaa adeegyada bulshada sida: dhakhtarradii, iskuulladii, warshadihii korontada, mishiinnadii iyo ceelashii biyaha iyo inta badan dhismayaashii wasaaradaha iyo wakaaladaha ay dawladdii hore lahayd.
Dhinaca kale, waxa burburay Buundooyinkii iyo Waddooyinkii halbawlaha ahaa ee isku xidhayey magaalooyinka waaweyn; laga bilaabo Hargeysa ilaa Laascaanood waxa go’naa ama dunsanaa ugu yaraan dhowr iyo toban biriij oo muhiim ahaa. Markii uu dhacay isbeddelkii siyaasadeed, waxa abuurantay xaalad nololeed oo adag iyo duruufo dhaqaale oo aad u qallafsan. Dhaqaalaha dadka iyo dalku wuxuu ku xidhnaa xoolaha nool iyo qof-qofka waddamada dibedda wax looga soo diro.
Dekedda Berbera way shaqaynaysay oo wax baa ka dhoofayey waxna wey ka soo degeyeen, laakiin waxa yar ee laga qaado may ahayn wax ku filan hawlaha qaranka. Awooddii dhaqaale ee Dawladdii xilligaa 1991-kii dhalatayna wuxuu guud ahaanba ku tiirsanaa xaaladda dhaqaale ee noocaas ah. Dakhliga keliya ee dawladda soo gali jiray wuxuu ku tiirsanaa dadka ganacsatada ah; mid ay wax ka qaadato iyo mid ay wax ka sii deynsato oo dabadeed lagu yidhaa markii dhaqaale la helo ayaa lagu siin doonaa.
Waxa xusid mudan xoolaha nool oo ah badeecadda ugu muhiimsan ee aynu debedda u dhoofinno ee ay lacagta adagi dalka ka soo gasho isla markaana ahaa laf-dhabarta uu dhaqaalahu ku tiirsan yahay, may jirin ama way yarayd berigaa xoolaha in lagu soo beddelo wax lacag naqad ah (cash). Tusaale ahaan, Xoolaha Nool waxa loo dhoofin jiray Sucuudiga/Yemen oo ahayd sayladda keliya ee berigaa xoolaheenna u furnayd waxa lagu soo beddelan jiray buskut, caagado iyo bagaash kaleba, iyadoo in badan laga dhici jiray xoolaha. Buskutkaa iyo caagadahaa ayaa dabadeed dib loo iib geyn jiray. Waxa dhici jirtay in xoolo dhan oo la dhoofiyey oo ninkii iib geeyey uu ku soo beddeshay caagado, buskut iyo wax aan dhaamin.
Marka laga yimaaddo dhaqaalaxumadii jirtay, waxa ka sii darnayd rejo xumadii dadka, waxaana xusid mudan in la badbaadin kari waayay hannaankii dhaqaalaha ee hore u jiray. Shaqo la’aanta iyo dhaqaale xumadu waa laba shay oo midba uu ka kale saamayn toos ah ku leeyahay. Markay dhaqaale xumo dhacdo, waxa iyana dhacda shaqo la’aan taas oo bulshada oo dhan wada saamaysa. Dabcan waxaan dhex joogay dalkaa aan soo sheegay dhaqaale xummadda ka jirtay, dadkana waxaan la qabay dufuuha shaqo-la’aanta ee haystay. Ma jirin dawlad loo shaqeeyo, shirkado iyo meelo kale oo loo shaqo tagaa midna. Dalku wuxuu ahaa dal inta badan ay burbursan yihiin kaabayaashii lagamamaarmaanka u ahaa adeegga bulshada iyo koboca dhaqaalaha.
Waxa kale oo iyana gebi ahaanba meesha ka baxay oo burburay nidaamkii dawladeed ee abuuri lahaa dhaqaalaha, dakhliga iyo waxsoosaarka lagu horumarrinayo dalka. Ma jirin Bangi iyo hay’ado Maaliyadeed oo shaqaynayey, ma jirin nidaamkii cashuuraha lagu ururin lahaa dadkuna gebi ahaanba umay bislayn inay bixiyaan wixii cashuur ah ee ku waajibay.
Ma jirin hay’ado dawladeed oo dadku u shaqeeyaa, ma jirin hay’adaha aan dawliga ahayn oo shaqo loo doonto sida kuwa haatan kumanaanka maraya oo kale, ma jirin shirkado waaweyn oo waddani ah oo loo shaqo tago bulshadana u abuura shaqooyin kala duwan. Ma jirin kaalmo dibadeed iyo dhaqaale toos ah oo ay xilligaa dunidu nagu caawin jirtay.
Waxaannu ahayd xaalad nololeed oo aad u adag iyo duruufo dhaqaale oo qallafsan, kuwaasoo run ahaantii qof wal oo bulshada ka tirsan ku yeeshay saamayn toos ah. Qof ahaan waxaan la kacaa-wadaagay oo aan la kulmay dal xaaladdaa ku sugan, oo aad mooddo in Nuclear-bomb lagu dhuftay (Ilaahay inaguma keeno weligeen’e).
Iyadoo ay jireen dhibtaa iyo waayahaa adagi, waxaan haddana mar walba ku dedaali jiray sidii aan shaqo u heli lahaa. Si aan nolol-maalmeedkayga u debbero, duruufihii dhaqaale xumo iyo xaaladihii shaqo-la’aaneed ee berigaa dalka ka jiray ayaa waxay igu kelifayeen inaan u guntado oo aan diyaar u noqdo inaan ka shaqeeyo nooc kasta oo shaqo ah. Waan fara madhnaa wax lacag ahna maan haysanin, haddana waxaan ku fikiray inaan sameeyo meherad yar oo dukaan (macdaar) ah. Muddo ka dib waxa iga gacan qabtay oo aan waxoogaa lacag ah ka helay walaalkay oo berigaa gaadhi uu lahaa in muddo ah ugu shaqaynayey Hay’ad la yidhaahdo (Coopi). Dabadeed waxa ii suurto gashay inaan sameeyo meherad yar oo dukaan ah.
In muddo ah baan dukaankii yaraa gacanta ku hayey oo aan ka shaqaynayey, kaas oo aan run ahaantii is leeyahay waqti adag baad kaga soo gudubtay. Arrintu si kastaba ha ahaatee, markii ay muddo ka soo wareegtay meheraddii yarayd way kacday oo way iska baabba’day. Markii uu dukaankii yaraa iga baabba’ay, aniga iyo xaaladdii shaqo la’aanta ayaa mar kale isu soo baxsannay waxana khasab igu noqotay inaan shaqo raadsado. Mushkilad ma laha inaad xooggaaga subaxdii la kallahdo oo aad ku soo shaqaysato bariiskaaga iyo wixii arsaaq ah ee Allah kuu qoray. Balse nolosha waxa ugu daran markuu xooggaagu waxba kuu goyn waayo, oo aad weydo wax aad ku qabato iyo wax shaqo ah oo aad ka xoogsato.
Waad garan kartaa culayska ay leedahay marka adoo fara madhan oo aan meelna waxba ku ogayn, ay haddana kuugu darsanto shaqo la’aani. Shaqo-doonkaygii waxa iga soo maray waqti iyo waaye aad u adag. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo ku sugan magaalada Burco, markaan subaxdii toosay waxaan go’aansaday oo aan u diyaar garoobay inaan shaqo raadsado. Xaaladda dhaqaale iyo ta nololeed ee xilligaasi aad bay u adkaayeen, mana ay jirin shaqooyin aan kala dooran karayey oo suuqa shaqo-bixinta keliya ee markaa jiray wuxuu ahaa xagga meheradaha ganacsiga ay dadku leeyihiin, sida dukaannada iyo makhaayadaha iwm.
Waxaan ku talo galay in aan albaab kasta oo furan shaqo waydiiyo oo ka shaqeeyo nooc kasta oo ay shaqo tahayba; ha ahaato xammaal, kuuli, makhaayad, hudheel, dukaan iyo shaqo kasta oo aan xoogayga kaga shaqaysan karo. Waxaan suuqa soo galay abbaaro 6:00 am, markii aan bilaabay in aan is hortaago oo aan shaqo weydiisto albaab kasta oo furan oo meherad ah. waxaan markii dambe galay Hudheel ku yaallay magaalada Burco oo berigaa caan ahaa oo la odhan jiray BEDER, ilaa wakhtigan wuu shaqeeyaa.
Kadibana waxaan maamulihii Hudheelka weydiiyey: “waar ninyohow shaqo doon baan ahaye ma haysaa shaqo?” Dabadeed maamulihii Hudheelku wuxuu iigu jawaabay: “haa shaqo wey bannaan tahay oo waxaan hayaa shaqo aad la shaqaynayso qolada jikada (madbakha) iyo kaaliye-Mudalab oo la shaqeeya ee ma doonaysaa inaad ka shaqayso?” Dabadeedna waxaan maamulihii ku idhi: “haa waan ka shaqaynayaaye maxay noqonaysaa shaqada aan qabanayo?” Maamulihii Hudheelku wuxuu igu yidhi: “Waxaad caawinaysaa oo aad ka hoos shaqaynaysaa Mudalabka koowaad ee cuntada dalbaya. Waxaa kale oo dalbanaysaa wixii sharaabka, maraqa, iwm. Sidoo kale waxaad miisaska ka soo rafacaysaa oo aad ka soo ururinaysaa weelka iyo saabaanka wax lagu cuno miisaskana waad masaxaysaa.”
Wada hadalkaa kooban ee dhex maray aniga iyo nin ka mid ah maamulkii Hudheelka BEDER kaddib, waxaan go’aansaday inaan aqbalo oo aan ka shaqeeyo shaqo heerkeedu yahay dalbashada sharaabka, maraqa iyo biyaha oo la qaado, sidaasna waxaan ku bilaabay shaqadaydii Hudheelka Cuntada.
Muddo 6 bilood ah ayaan Hudheelkii Cuntada ka xoogsanayey oo aan ku shaqaynayey. Halkii aan gacmaha laaban lahaa ee aan camal la’aan meel iska fadhiyi lahaa waxa igala qummanaatay inaan xooggayga maalo oo aan bariiskayga xoogsado. Taasina waa sababta ugu muhiimsan ee aan u aqbalay inaan ka shaqeeyo shaqadaa Hudheelka cuntada. Sida xaqiiqda ahna shaqadaa wakhtigii aan joogay waxaan kaga bed-baaday camal-la’aantii iyo waayihii adkaa ee berigaa dalka ka jiray. Markii aan Hudheelkii in muddo ah ka shaqaynayey waxaa ii suurto gashay inaan wakhtigii adkaa wax mid ah ku dhaafo. Arrintu si kastaba ha ahaatee, muddo kaddib shaqadii Hudheelka waan ka tegay.
Waxaa suuqa ku badnaa waxa loogu yeedho shaxaadka oo ah baryo magac loo bixiyey ama dawersi la asluubeeyay. In badan oo dhiggayga ah ayaa xilligaa shaxaad ku noolaa oo aan baryada ceeb u arkayn. Shaqadana asal ahaanba waxa loo galaa macaashka uun maaha, waxay kor u qaaddaa hanka qofka, waxay ilaalisaa sharaftiisa, caafimaadka maskaxda iyo kan jidhkaba way u fiican tahay, waxaad doontaba aad ka macaashtid, oo heerka ay doonta ha noqoto ee shaqo waa shaqo waana sharaf, cisi iyo horumar. Baryaduna waa dulli iyo han yaraan. Waxaan shaqadan ka bartay sabirka shaqada. Qofka madaxda fiican noqdaana inta badan waa ka shaqada shaqooyinka ugu hooseeya ka soo bilaaba, waxaanay u tababbartaa waayaha nolosha iyo dadka uu madaxda u noqon doonaa waxay ku jiraan xilliyada kala geddisan. Nin ladnaan uun madax ku noqday ma oga dad masaakiin ahi inay waayahan qabaan.
Waxaanan dareemay qiimaha shaqadu leedahay, dhibta shaqo la’aantu ku hayso dadkayga iyo heerka shaqo-la’aantu marayso, waana arrin aan xasuustayda ka bixin wakhtiyadii kala duwanaa ee noqolshayda. Nin barwaaqo ku koray belaayo kama warrami karo, qof baahanna bar-tilmaameed horumar uma noqon karo. Dawlad la’aantii, darxumadii iyo waayihii aan soo sheegay oo weli laga sugan yahay, waxay ahayd 14|Nov|1994 markii uu mar kale dagaal sokeeye ka qarxay magaalada Hargeysa, iyadoo duruufihii hore lala kacaa kufayo ayay arrintan dagaalku abuurtay xaalad kale oo cusub oo isugu jirta amaan xumo, dhaqaale xumo iyo jaahwareer cusub oo dadkii horaba u dhibbanaa la soo dersay, dagaalkii wuxuu hore ugu sii siqay gobolka Togdheer ee aan degganaa waxaanay ahayd 28|03|1995 markii dagaal ehliyi ka bilaabmay magaalo-madaxda gobolka ee Burco. Waxay noqotay in dadkii qaxoonti cusub ugu baxaan miyiga iyo magaalooyinka ka baxsan Burco qofba meeshii degaankiisa ahaa ama uu cid ku ogaa.
Waxa aannu tagnay magaalada qadiimka ah ee Beer oo aan aad uga durugsanay magaalada Burco qiyaas ahaana u jirta 30km, waxaan soo gaadhay magaalada Yiroowe oo xarun ganacsi u noqotay wixii Burco bari uga soo baxay. Iyadoo shaqo la’aantii hore jirto oo culays kale iigu darsamay ayaannu kulannay 03|04|1995 ninka la yidhaahdo Axmed Warsame Ducaale oo qol jiingad ah ku hayey xafiiska Fooniye, wuxuuna igu yidhi: “waar ninyohow waan arkaa oo ma haysid wax camal ah ee xafiiskan fooniyaha maad igala shaqayn oo maad ii noqon gacan-yare?”
Dabadeed waxaan ku idhi: “waa si wanaagsan waan kula shaqaynayaa oo shaqo-raadis baaban ahaaye, laakiin waxba kama aqaan farsamada Fooniyaha ee maxay noqonaysaa shaqadaydu?” Wuxuu igu yidhi “shaqada Fooniyuhu ma aha wax sidaa u sii adag anigaana ku tababbaraya.”
Waaxanu uu ii sharraxay siduu Fooniyuhu u shaqeeyo. Sidaasna waxaan ku bilaabay shaqadaydii iigu horraysay ee ahayd Fooniyaha/Taarka. Wuxuu ahaa xilligaa farsamada Isgaadhsiinta ee lagu xidhiidho gudo iyo debedba, manay jirin gobolka Togdheer wax Tell ahi wakhtigaa. Nasiib wanaag shaqadii Fooniyaha markiiba waan la qabsaday waxaanan noqday nin xariif ku ah (ha noqoto qaabka adeegsiga ama xagga farsamada). Waxa xusid mudan in berigaa aanay dalka ka jirin Computer, Telephone, Fax, Internet iyo e-mail midnaba. Xagga is-gaadhsiinta, Fooniyaha ayaa ahaa laf-dhabarta ugu muhiimsan ee xidhiidhada ganacsi lagu kala socodsiin jiray. Waxa la odhan karaa kaalinta Fooniyuhu waxay berigaa la mid ahayd kaalinta ay haatan farriimaha qoran email, Mobile-ka (sms) iyo Internet-ku kaga jiraan ganacsiga iyo lacag-dirista. Marka qofka lacag loo soo diro waxa looga yeedhi jiray xafiiska Fooniyaha, maadaama ayna jirin farriin telefoon (sms) oo lagu wer-gelin karayey inay lacagi u taallo.
Berigaa dadku may haysanin inta badani warqado aqoonsi oo magacoodu ku qoran yahay oo ay isku caddayn karaan, sida keliya ee qofka lagu raadin jiray ama lagu baadi-goobi jiray waxay ahayd qaab degaan ama hayb reernimo. Waxaana qofka lagu naadin jiray hebel-hebel ama heblaayo hebel oo reer hebel ah!! Markii aan Shaqadii Fooniyiha ilaa 6 bilood ka shaqaynayey oo aan gacan-yare u ahaa. Ninkii xafiiska Fooniyaha ka masuulka ahaa ayaa xafiiskii Fooniyaha ka wareegay, waxa aannu shaqo ka helay xafiiska xisaabaadka ee Xawaaladda Dahabshiil. Waxaana igu soo wareegay maamulkii Fooniyaha.
Shaqo iyo xil kasta oo qofka masuul looga dhigo, heer kasta oo ay yihiinba, wuxuu ka dhalin karaa isbeddelka loo baahan yahay, wuxuuna ka dhigan karaa fursad uu naftiisa ku horumariyo oo u saamixi karta in jaranjaro kale uga sii gudbo. Waxa Eebbe uu igu ilhaamay inaan noqdo qof fahmo furan oo ay u fudud yihiin xagga farsamada iyo hal abuurkeedu.
Markii aan la wareegay xafiiskii Fooniyaha, si codka iyo awoodda Fooniyuhu u kordhaan oo meel fog looga maqli karo, waxaan ku fikiray bal inaan farsamo cusub oo meelaha qaar ku arkay aan qaab cusub u hal-abuuro oo aan wax ku soo kordhiyo xadhkihii iyo antennihii dhaadheeraa ee Fooniyaha. xilligaa Fooniyaha ayaa ahaa laf-dhabarta xidhiidhka is-gaadhsiinta ee lagu kala wado hawlaha ganacsiga Djibouti, Addis Ababa, Nairobi, Dubai, Somalia iyo Somaliland.
Waxaan isku dayay in aan xafiiskii Fooniyaha ee masuulka la iiga dhigay aan ka hirgeliyo horumar la taaban karo taasina waxaan u arkayey guul aan aniga iyo Shirkadduba gaadhnay (in kastaba ha le’ekaatee). Waxaanay ii horseedday in aan shaqadii hore ugu sii socdo, waxaanay kor u kacay kalsoonidii maamulka ee in aan shaqada hanan karo. Waxaan shaqadan ka bartay muhiimadda xidhiidhka iyo adeegyo farsamo, (Technical commonications), heerka dalkaygu ka joogay sancada technology-yada, waxaanay igu dhiirisay in aan hore ugu sii socdo farsamada casriga ah ee IT oo xilligaa bilaw ahayd. Fooniyaha waxaa lahaa shirkadda Dahabshiil oo u qaabbilsanaa xidhiidhka isku xidhka xafiisyada gudaha.
Waxaa ii yeedhay maamulka shirkadda Dahabshiil 20|09|1995 waxaanay igu wargeliyeen in shaqo cusub la iiga baahan yahay si ku meel-gaadh ah, waxaana la ii dhiibay lacag dhammayd ilaa 250 milyan oo Somali shilin ah oo gaadhi weyn oo TM ah laga buuxiyay oo qiyaas ahaan u dhigmaysay 150 ilaa 200 kun oo Doollar, waxa la igu wargeliyay inaan degaanka Ceel-afweyn ka soo iibiyo xoolo, Iyadoo oo aan la kaashanayo nin la yidhaahdo Cabdi Muuse oo degaanka Ceel-afweyn ka soo jeeday.
Dabadeedna waxaan u kicitimay xaggaa iyo Ceel-afweyn. Waxay ahayd xilli roobaad jidkuna aad buu u dhib badnaa, gaadhigii aannu wadanayna marar badan ayuu dooxyadii naga galay, oo aannu aad ugu rafaadnay, waxaanay nagu qaadatay laba cisho in aannu gaadhno Ceel-afweyn oo ah meel ugu badnaan loo socdo 4 saacaadood. Balse waxa aan odhan karaa dhibta maalintaasi aannu jidkaa kala kulannay inaan islahaa mar uun may dhici in halkaasi waddo laami ah laga sameeyo, waanay dhacday iyadoo laga joogo 20 sanadood, waxaanan nasiib u yeeshay in aan ka mid ahaado dadkii Waddadaa dheer 300 mtr ah ah ugu badheedhay inay ka hirgeliyaan degaankaa.
Markaanu Ceel-afweyn nimidba waxaan ku dhaqaaqay sidii aan u qorshayn lahaa hawshii la ii diray. Maalmo yar kaddib, waxaan Ceel-afweyn ka sameeyey xafiiskii shirkadda Dahabshiil ee xawaaladda iyo xoolo dhoofinta iyo xaruntii Fooniyaha oo laf-dhabar u ahaa xidhiidhka is-gaadhsiinta shirkadda. Hawshii xafiisku si fiican bay isugu dubbadhacday, waxaanan bilaabnay in aannu soo iibinno adhi 3500 ilaa 4000 oo neef ah, (Mugga doon ama Markab) xoolahaas oo ay shirkadda Dahabshiil ugu tala-gashay inay ka gaadhsiiso xilligii dhoofinta xoolaha oo gebagabo ahaa.
Markii aan muddo ku sugnaa degaankii ee aan is dhex waday hawlihii xawaaladda iyo xoolo-dhoofinta ee aan xafiiskii si wanaagsan u dhaqaajiyey, ayaa 21|12|1995 maalin khamiis ah Nuux Siciid Ducaale oo ahaa Odayga guud ee Maamulka shirkadda ee Soomaaliya iyo Somaliland igala soo hadlay Fooniyaha waxanu igu wargeliyay beddel iyo in aan ka shaqo-galo Dahabshiil ee Hargeysa. Muddo saddex cisho ah gudahood ayaan ugu baqoolay Hargeysa. Shaqadan waxaan ka bartay ganacsiga xoolaha, qiimaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin xooluhu dhaqaalaha dalka, faa’iidada ganacsiga, Soomaalida odhan jirtay: baayacmushtirigu wuxuu ku siiyaa wax aan aabbahaa iyo hooyadaa ku siin. Waxaa kale oo ii soo baxday baahida jidadka, iyo muhiimadda iskuxidhka waddooyinku u leeyihiin koboca dhaqaalaha dalka.
Waxay ahayd jawi igu cusub horena ugama aan shaqayn in kasta oo aan marar safar ku imi magaaladan Hargeysa. 01|01|1996kii maalin Isniin ah ayaan si rasmi ah shaqadii cusbayd uga bilaabay Hargeysa. Waxa weli magaalada ka sii muuqday burburkii iyo saamayntii ay kaga tageen dagaalladii sokeeye ee ka dhacay 1994-kii.Qaybo badan oo ka mid ah magaalada Hargeysa ayaa madhnaa oo haawanayey, gebi ahaanba dhinaca koonfurta magaalada Hargeysa marka laga tallaabo biriijka badankeeda waa laga qaxay, marka laga reebo degmada Axmed Dhagax oo ay dadku deggenaayeen.
Sidoo kale, suuqa weyn ee caanka ah ee ku yaal badhtamaha magaalada ee la yidhaa Waaheen gebi ahaanba waa laga qaxay suuquna wuu baabba’sanaa oo wax xarakaad ganacsi ahi kamay soconin. Berigaa waxa magaalada Hargeysa suuq u ahaa agagaarka Idaacadda iyo waxoogaa kooban oo Cakaara ka shaqaynayay wax kale oo xarakaad ganacsi ahi ma jirin. Markii la ii soo beddelay Hargeysa, waxa jiray duruufo nololeed oo adag dadkuna way iska dhibbanaayeen, laakiin si tartartiib ah ayay uga soo kabanayeen khasaarihii iyo saamayntii ay dagaalladii sokeeye ku yeesheen nolosha bulshada.
Xafiiskii Xawaaladda Dahabshiil ee aan ugu imi Hargeysa wuxuu ku yaallay agagaarka dugsiga Biyo-dhacay. Markii ay dagaalladii ehelku Hargeysa ka qarxeen, suuqa badhtamaha magaalada waa laga qaxay oo dadka badankiisu waxay u guureen agagaarka Idaacadda, dabadeedna xafiiskii Xawaaladda Dahabshiil ay ku lahayd badhtamaha magaalada isna halkaas ayaa loo wareejiyey.
Xafiisku wuxuu ahaa hal qol oo yar oo aan qiyaastii ka weyneyn 5m X 5m, waxana maamule ka ahaa nin la yidhaahdo Maxamuud Maxamed Aare. Waxaanan noqday ninkii labaad ee ka hawl gala xafiiskii Hargeysa, isla markaana ku wehelinayay ee la shaqaynayey maamulihii xafiiska ee markaa. Bilowgii 1996-kii xaaladdii amaanka ee magaalada Hargeysa wey ka soo roonaatay, waxa dabadeed xafiiskii loo soo wareejiyey badhtamaha magaalada, gaar ahaan dhismaha caanka ah ee Hotel Gargaar hoostiisa oo aannu ka kiraysannay xafiis woxoogaa kii hore ka yara weyn kuna yaala qalbigii magaalada. Isla sannadkaa 1996-kii, maadaama uu jawigii nabadgelyadu sii wacnaaday hawshii xawaaladdu kor bay u kacday. Waxaan filayaa in aannu xilligaa bishii bixin jirnay lacag gaadhaysa 70,000 oo USD. Bilowgii sannadkii 1997-kii shaqadii Xawaaladda oo aad u kobocday awgeed, maamulkii sare ee Shirkadda Dahabshiil waxay lagama maarmaan u arkeen in la ballaadhiyo xafiiskii Xawaaladda ee Gargaar oo loo kala qaybiyo Hargeysa-A iyo Hargeysa-B si macmiisha loogu fududeeyo.
Lacagaha laga soo diro waddamada Carabta iyo Ingiriiska waxa la hoos geeyay oo loo sameeyey xafiis u gaar ah. Waddamada kale ee dunida oo la isku darayna waxa la hoos geeyay xafiis kale oo u gaar ah. Xafiiskii Xawaaladda ee Gargaar (A) oo aannu markii hore ku bilawnay labada nin, aniga waa la iga kexeeyey waxana la ii beddelay xafiiska cusub ee la sameeyey ee Hargeysa (B). Xafiiskii cusbaa ee la ii beddelay waxa masuul looga dhigay nin kale oo cusbaa Daa’uud Abshir, oo aan aniguna ka hoos shaqaynayey. Muddadaa aan ka shaqaynayey Xawaaladda Dahabshiil ee Hargeysa waxaan mar walba ka hoos shaqaynayey masuul kale, waxaanan ku shaqaynayey karraani ahaan.
Xafiiskii Xawaaladda ee Hargeysa (B) markii aan dhawr bilood ka shaqaynayey, ayaa aniga maamulaha Laanta cusub la iga dhigay xafiiskii Dahabshiil ee (B), taas oo ahayd dallacaaddii iigu horraysay ee aan ka helo xafiiska Hargeysa. Ka hor intaan Xafiiskii Xawaaladda Dahabshiil ee Hargeysa loo kala qaybin A iyo B, aniga iyo maamulaha oo reer Gabiley ahaa iyo labo nin oo kale oo mar danbe nagu soo biiray dhammaantayo waannu ku cusbayn shaqada Hargeysa. Haddaba, maadaama midkaayana aannu magaalada Hargeysa ku dhalanin ama aannu ku soo barbaarrin, guud ahaanba waxa jirtay dhibaato iyo caqabad naga haystay xagga aqoonsiga dadka ama sidii aannu u xaqiijin lahayn, deegaanka iyo haybta reernimo ee dadkii lacagaha soo doonanayey, xilligaana waxaa ciwaan ahaa (Address) haybta oo dadka lagu raadin jiray maadaama aannu jirin hannaan madani ah oo lagu raadiyo. Markaannu dadka lacagaha loo soo diro weydiinno haybtooda ama cid iyaga garanaysa, waxaannu marar badan kala kulmi jirnay hadallo qallafsan oo taag-taagan, waxayna nagu odhan jireen: “Waar-yaadhaheen, ma idinkoo reer Burco ah ayaad Hargeysa dhexdeeda cid na garanaysa ama dammiin nagu weydiinaysaan?!”
In kastoo aan ahaa nin qoraalka ku gacan fudud, fahiim ah oo darka (desk) aan joogana aan la isku habsaami jirin, haddana garashada iyo aqoonta aan u lahaa dadka ka soo jeeda degaanka Hargeysa ayaa ahaa kuwo saamayn toos ah ku lahaa habsami-u-socodka shaqadayda.
Haddaba, si aan uga gudbo caqabadaha naga haystay xagga garashada dadka macaamiisha ah, waxaan sameeyey oo aan dejiyey hab iyo nidaam ii fududeeya inaan dadka ka soo jeeda degaanka Hargeysa ku waydiiyo su’aalaha damiinka. Qofka lacagta qaadanaya maadaama waxa lagu garanayo uu yahay reerkiisa, reer kasta oo ka soo jeeda degaanka Hargeysa waxaan bartay ilaa dhawr iyo tobanka qof ee ahaa haldoorka reerka amaba ugu magaca weyn reerkaa isaga ah. Marka uu qofku lacagta soo doonto, si aan u xaqiijiyo inuu yahay qofkii lacagta lahaa waxaan weydiin jiray oo aan ku odhan jiray: Hebel ma garanaysaa? Maya! Hebelkaa kale ma garanaysaa? Maya! Haddaa hebelkaa kalena ma garanaysaa? Maya! Dabadeed qofka oo is garwaaqsaday ayaan ku odhan jiray: si aannu u xaqiijino inaad tahay qofka lacagta leh, damiin doono ama soo kexee qof adiga ku garanaya. Arrintu si kastaba ha ahaatee, nidaamkaa iyo hannaanka-hawl-gal (mechanism) ee aan samaystay ayaa ii sahlay in aan si fudud shaqadaydii u gudan karo, hawlaha Xawaaladdana aan si degdeg ah u kala socodsiin karo.
Maadaama oo aannu guddoomiyaha shirkadda ehel ahayn, dadka qaar ayaa tuhunsanaa in shaqada qaraabo laygu geeyay balse taasi ma jirin. Waxaan jecelahay in aan xuso oo aan wax yar is dul taago doodda aniga iyo guddoomiyaha shirkadda na dhex martay taas oo ahayd ka hor intaan la ii magacaabin maamulaha (branche manager) Xafiiskii Xawaaladda ee Hargeysa (B). Waxaan ahaa nin shaqadiisa ka adag oo shaqada ku gacan fudud, xagga qoraalka aad ugu deg-deg badan isla markaana aad uga adag kala socodsiinta hawlaha darka (desk) aan joogo. Waqtiyada uu guddoomiyuhu kormeer-hawleed nagu soo maro wuxuu badanaaba la kulmi jiray miiskayga oo aan lagu buuqsanayn oo ay dadku teelteel ku yihiin, halka miisaska kalana ay dadku aad ugu buuqsan yihiin. Dabadeedna, isagoo guddoomiyuhu malaha tuhunsan ninkan qaraabaa tihiin oo shaqo ayaan loo dirin, waxa uu yidhi: “waar ninkan miiskiisu waa madhan yahay oo shaqadu wey ku yar tahay ee maxaa shaqada loogu kordhin waayey?!” Dhawr mar oo hore ayuu guddoomiyuhu su’aalo iyo hadallo noocaas oo kale ah i weydiiyey, waxaan filayey in maamulihii xafiiskaygu uu arrintaa ka hadlo, balse may dhicin. Waxaana dhacda mararka qaar in qof si fiican u shaqaynaya madaxdu uga fogaato in ay qaraabo yihiin balse sax maaha qof kastaa waa in uu helo xaqiisa.
“Guddoomiye, anigu waxaan ahay nin shaqadiisa ka adag oo markiiba ka soo baxa, dadkana isuma daahno oo waxaan samaystay oo aan dejiyey hab iyo nidaam ii sahlay inaan dadka macaamiisha ah si gacan fudud ugu adeegi karo. Markaan shaqadayda dhammeeyana anigu cidna uma tago oo lama sheekaysto ee anigaa darkaygaa madhan la iigu yimaaddaa! Haddaba, haddii ay ishaadu qabato darkayga oo madhan ama aan lagu buuqsanayn macnaheedu maaha inaanan wax shaqo ah haynin ama aniga shaqada la iga yareeyey!” ayaan ku idhi guddoomiyihii.
Dooddaa aniga iyo guddoomiyaha na dhex martay kaddib, shaqadaydii ayaan ku jeestay oo aan iska sii watay. Guddoomiyaha laftiisu wuu sii watay booqashooyinkiisii uu noogu iman jiray, wuxuuna si ku-tala-gal-ah ama kedis ah noogu soo mari jiray kormeer hawleed. Arrintu si kastaba ha ahaatee, maalin maalmaha ka mid ah ayaa xafiiskii aan ka shaqaynayay waxa kormeer noogu yimid guddoomiyaha si uu u indho-indheeyo qaabka ay hawlaha Shirkaddu u socdaan. Markii uu Guddoomiyihii cabbaar fadhiyey ee uu malaha u kuur-galay qaabkii ay hawluhu miis walba uga socdeen iyo farsamada uu qof walba macaamiisha ugu adeegayey, ayuu inta uu is taagay dabadeedna yidhi: “Waar-yaadheheen; ALLAA INNA LEHE, ninkani wuxuu doonaba ha adeegsado ama isagu wuxuu doonaba ha kula hadlee laakiin xagga shaqada wuu idinkaga wada wanaagsan yahay.
Waa nin shaqada ku gacan-fudud, dadka markiiba fahmi og oo shaqadana kala socodsiinaya!!” Run ahaantii hadalkaa uu yidhi guddoomiyuhu si aan qiyaas lahayn ayaan ugu farxay uguna diirsaday wuxuu ahaa qiraal/qubuul, wuxuu ahaa hadal aniga si weyn ii dhiirri-geliyey maadaama guddoomiyaha qudhiisu uu qiray oo uu gar-waaqsaday hawl-karnimada iyo kartida shaqo ee aan muujiyey. Marka aad xafiis joogto nooc kastaa dadka way ku soo marayaan. Iyadoo ay arrinta garashada macmiishu culays weyn naga haysay aya haddana marmarka qaar waxaa kugu imanaysa dhacdo ku sii culaysisa marka uu qof caan ah, ama farsamooyin uu yaqaanno dartii dadka qaar awliyo u yaqaanno wuxuu si sahalan kuugu abuuri karaa saxmad kale. Maalin ayaa waxaa noo yimi Oday Barre Biindhe la yidhaahdo, oo ka mid ah dadka rooxaanta ama awliyada sheegta. Waxaannu waydiinnay dammiin, maadaama oo aan la garanayn.
Wuxuu yidhi “Ma aniga ayaad dammiin i waydiinaysaan! Wallaahay in aan lacagta meesha idiin ku jirta idinka caddayn, oo xashiish ka dhigi!”
Waxa ka daran dad badan ayaa daba yaacaya oo uu sheekh u yahay, oo leh waar ma Barre ayaanad garanayn, waar mallaa waad baxaysaa Odayga wixiisa iska sii. Lacagtuna waa Labo boqol oo Dollar. Markii uu xafiiskii saxmad iyo buuq ka sameeyay, aakhirkii si uun ayaan wax u maaraynay, oo waannu iska siinnay. Waxaan shaqadan ka bartay marka aad shaqaale tahay waxaad gaadhaysaa meesha dedaalkaagu ku geeyo, aqoontaada iyo khibraddaada haddii ay karti waayaan waxa laga yaabaa in aan isha kaa sarraysaa ku qaban, hoggaaminta iyo maamulkana waxaa u muhiim ah oo qiimo weyn u leh ogaanshaha qofka shaqaalaha ah iyo qiritaanka shaqadiisa. Shaqadii iyo dakhligii Xawaaladda Dahabshiil ALLAA u barakeeyey oo aad bay u kordheen.
Laga bilaabo badhtamihii 1997-kii ilaa dabayaaqadii 1999-kii ayaan maamule (branche manager) ka ahaa Xafiiskii Xawaaladda Dahabshiil ee Hargeysa (B), kaas oo ay shaqadiisii si aan qiyaas lahayn kor ugu kacday. Halkii aannu awal bishii ka bixin jirnay 70,000 oo US Dollar, markii la iga beddelay Xafiiskii aan maamulaha kaa haa ee Hargeysa (B), waxaannu bishii bixin jirnay lacag ka badan 1 Milyan oo USDollar. Waxa kale oo iyana xusid mudan in markii ugu horraysay ee ay Shirkadda Dahabshiil u gudubto nidaamka adeegsiga Computer-da (1998-kii) waxa lagu tijaabiyey lagana hirgeliyey xafiiskii aan maamulaha ka ahaa. In kasta oo aan qaatay koorsooyin ku wajahan aqoonta Computer-ka, haddana waxay ii ahayd indho-furkaygii ugu horreeyey oo camali ah adeegsiga Aaladda Computer-ka iyo fursad qaaliya oo aan si fiican ugu sii bartay Computer-ka.
Hammigaygu xilligaa wuxuu ahaa iskaa u shaqayso oo ka xorow shaqo aad cid kale u shaqayso. Waxaan mar walba ku fikiri jiray inaan maarmo oo aan keliday cagaha isku taago isla markaana aan jaanis u helo raadinta aqoonta iyo barashada cilmigaba; si haddii aan ka tago shaqada Shirkaddan aan aqoontayda shaqo ka fiican ugu helo. Sidaa darteed waxaan doonayay in aan samaysto dhaqdhaqaaq ganacsi oo ii gaar ah oo mustaqbalka ii suurto gelin kara inaan kaga maarmo inaan cid kale u shaqeeyo.
Ka dibna waxaan abuuray woxoogaa dhaqdhaqaaq ganacsi ah oo ka koobnaa dukaan, macmacaanle iyo farmasi. Meheradahaa waxaa maamuli jiray dad shaqaale ah, waxaanan kormeeri jiray markaan soo rawaxo.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa aniga la iga dacweeyey maamulkii sare ee shirkadda oo loo gudbiyey war ama sheeko aan waxba ka jirin oo la leeyahay: “Xirsi si wacan ugama shaqeeyo xafiiska oo waxa uu shaqadii kaga mashquulay dukaannadiisa iyo meheradihiisa kale ee u gaarka ah.” Kaddib, guddoomiyihii iyo maamulkii sare ee shirkadda ayuun baa warkii rumaystay oo si uun afka isu saaray dabadeedna go’aan ku gaadhay in aniga la iga beddelo maamulaha xafiiskii Hargeysa (B). Guddoomiyihii iyo Maamulkii sare waxay is yidhaahdeen malaha ninkani xafiiskan uu maamulo ayaa ku hawl yar oo u suurto galiyey in uu samaysto meherado ganacsi oo uu kaga mashquulo hawlihii shirkadda. Sidaa darteed aynu isaga mashquulino.
Dabadeed waxay isla garteen in aniga dib la iigu celiyo xarunta Gargaar oo la ballaadhiyey laguna soo kordhiyey xafiisyo kale, shaqada iyo hawlaha ka socdaana ay aad u baaxad weynaayeen. Isla waqtiyadaa, xafiiska Gargaar waxa kale oo uu ahaa xarunta kaydka khasnadda guud ee shirkadda Dahabshiil ee laga bixiyo lacagaha maamulka Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan.
Kaddib waxa la iga dhigay khasnajiga guud ee shirkadda taas oo ahayd shaqo derejo-ahaan aan ka hoosaynin xilkaygii hore ee maamule waaxeedka, balse waxay ahayd shaqo aad u culus, waxaa ninka hayaa ka rawaxaa abbaaro 11:00 PM. Malaha waxa aniga la iiga dhigayey nooc ciqaabeed oo kale. Waxaad ogaataa adayga iyo culayska shaqo wuxuu qofka baraa iska caabin waxa aannu u horseedaa adadayg iyo in qofku isticmaalo awooddiisa ku kaydsan. Inta badan haddii lagu xaasido waa lagu dallacaa, duruufaha adag iyo dhibaatadana waxay sababi karaan in aad farsado kale samayso marka aad ku dedaasho sidii aad uga badbaadi lahayd, waana halka laga yidhi dhibaato kasta fursad baa ku lammaan.
Ujeeddada ka dambaysay ee shaqada Khasnajiga Guud la iigu dhiibay waxaan tuhunsanaa si aanan madaxaba kor ugu qaadin oo aanan u helin waqti firaaqo ah oo aan hawlo kale ku fushado, culayska ay shaqadu leedahay awgeed. Haddaba, markii aan shaqadii la wareegay arkay oo gartay culayska uu leeyahay xilka la ii dhiibay. Anigoo ka shidaal qaadanaya aragtida odhanaysa wax kasta oo adag, waxa ku jiri kara fursado lagu higsan karo horumar, waxaan go’aan ku gaadhay inaan muujiyo oo aan tuso in shaqada la ii dhiibay aanay ahayn mid u adag sida la moodayo ama laga dhigayo oo aan isbeddel ka sameeyo.
Waxaan qorsheeyay in aanan shaqada ka rawixin oo aan joojiyo wakhtigii qadada ee aan bixi jiray gurigeyga, balse taa beddelkeeda xafiiska qadada la iigu keeno. Waxaan yool iyo bar-tilmaameedba ka dhigtay in aan shaqada ka rawaxo 8-da fiidnimo ama ka hor. Iyadoo aan ku dedaalay in aanan shaqada isla sugin ee aan shaqada iyo xisaabaha dhaca gelinka hore aan diyaariyo oo aan gaar u xidho, shaqada gelinka dambe dhacdana iyadana sidoo kale. Isla habeenkii koowaad ee shaqada iigu horraysayba qaabkii aan hawsha u qorshaystay ayay u dhacday, waxaanan ku guulaystay in aan shaqadii ka rawaxo 8-da habeennimo, waxaanan sii maray xafiiskii xarunta maamulka guud, aniga oo damacsan in aan u tuso ama aan u dareensiiyo in shaqadii ay ii direen ee ay is lahaayeen ku culaysiya aanay ahayn mid u sii adag sida ay moodayeen! Waxaan ka faa’iidaystay tamarta qofka ku kaydsan ee ilaah ugu talagalay in qofku uu isticmaalo. Wuxuu Dr Ibraahiim Fiqi yidhaahdaa:
“Tamartu waa furaha labaad ee guusha, tamartu waa shidaalka nolosha, marka aad ku sugan tahay xaamaasad darajadeedu aad u sarrayso tamartaadu way sarraynaysaa, maxaa yeelay dhaqaajiyuhu wuxuu ku siinayaa tamar.”
Waxaan shaqadan ka bartay, muhiimadda ay leeyihiin habaynta shaqada, ilaalinta iyo maamulida wakhtigu. Sidoo kale haddii aad leedahay bar tilmaameed iyo yool in aad gaadhayso kana jibba keeni karto shaqo kasta oo markaa kugu culus. Mashaqo kasta oo soo korodhana waxaa jira qaab fursado looga samayn karo. Muddo yar ka dib waxaan bilaabay casharro la xidhiidhay barashada Computer Programming-ka. Waxaan si gaar ah u xiisaynayey oo aan doonayey in aan si xeeldheer u barto qaybta Programming-ka. Nin ahaa IT administrator, magaciisu ahaa Maxamed axmed oo nala shaqayn jiray ayaan mawduuca programming-ka wax ka weydiiyey, waxoogaa tilmaana guud ayuu iga siiyay, waxa aannu ii sameeyay nuskhad koobbi ah Barnaamijkii shirkadda ah (sample-copy of Database) waxaana sahlanayd in gudaha barnaamijka la galo oo wuu iska furnaa (Source Code-kiisu) waxaanan geliyay wakhti badan si aan khibrad fiican uga helo hannaanka uu u shaqeeyo barnaamiku iyo qaabka uu isugu xidhan yahay si aan fikrad fiican uga qaato. Arrintan oo si laxaad leh ii fahamsiisay barashada Programing-ka ee aan baranayay.
Si looga gudbo caqabadihii naga haystay xagga garashada dadka macaamiisha ah ee lacagta qaadanaya, oo waxa keliya ee lagu garanayo uu ahaa qabiilka, waxaan ku fikiray in aan sameeyo ama aan ikhtiraaco Programe Database ah oo macluumaadka macaamiisha lagu kaydiyo, isla markaana loogu sameeyo kaadhka aqoonsiga. Markii aan dhammeeyay maalintii dambe waxaan u yeedhay madaxii IT-ga ee Shirkadda Dahabshiil, oo la odhan jiray Faarax Maxamed Xirsi.
Waxa aannu aad ula dhacay hal-abuurkii iyo barnaamikii yaraa ee aan sameeyay. Run ahaantii muu ahayn wax weyn laakiin wakhtigaa ayuu wax tarayay, anigana la igama filayn in aan samayn karayo barnaamij. Balse Faarax oo i dhiirrigelinayay ayaa igu yidhi barnaamijkaaga aya ka fiican mid aannu ka soo iibinay Dubai. Barnaamijkii iigu horreeyey ee aan sameeyo maadaama uu ka dheereeyey kana fiicnaaday kii shirkadda loo soo iibiyey, waxay aniga ii ahayd guul kale oo aan ku tallaabsaday muddadii aan ahaa Khasnajiga Guud ee Shirkadda. Waxay ahayd Guul igu dhiirri gelisay inaan sii-amba-qaado barashada aqoonta Computer Programming-ka. Waxay ahayd tallaabo si weyn u sii xoojisay niyaddii iyo xiisihii aan u hayey barashada aqoonta Teknoolojiyadda Casriga ah ee IT-ga. Waxaan arrintan ka faa’iidaystay in mar kasta iyo meel kasta cilmiga iyo aqoon korodhsigu uu kula gudboonyahay oo uu yahay qaybta ugu wayn horumarka nolosha aadamaha.
Maamulihii waxaada IT-ga ayaa qoray warbixin kooban oo uu maamulka u gudbiyay taas oo uu ku sheegay in aan leeyahay mustaqbal fiican oo xaga aqoonta Computer-ka ah, sidaa darteedna ku dhiirrigeliyay maamulku in ay iisoo beddelaan xarunta guud gaar ahaan si aan uga hawl galo waaxda IT-ga.
Waxay ahayd maalin Salaasa ah, 15|08|2000, waxaana soo dhacday warqad beddel ah oo xarunta shirkadda la igu beddelayo, iyadoo shaqadaydana lagu asteeyay in aan noqon doono kaaliyaha waaxda IT-ga (IT Assistant). Waxa kale oo ay soo jeediyeen in la ii furo tababbar xagga IT-ga ah. Waxana na loo furay aniga iyo dhawr nin oo kale tababbar aqooneed shaqadan cusub la xidhiidha. Halkaana waxaan ka bilaabay xil iyo masuuliyad kale oo aan ka qabtay shirkaddaydii, taas oo aan u gutay si fiican oo hawl-karnimo leh. Waaxdii IT-ga markaan muddo waxoogaa ah joogay ee aan qoladii Xafiiska IT-gana si fiican ula shaqeeyey, ayay Shirkadda Dahabshiil ay qorshaysay inay ka wareegto programme-kii hore ee ay ku shaqayn jirtay oo ay u wareegto programme kale oo cusub. Shirkadda Dahabshiil waxay heshiis la gashay shirkad kale si ay ugu samayso programme cusub oo Database ah. Waaxdii IT-ga Faarax, Abshir iyo shirkaddii heshiiska lala galay waxay ku talisay inay lagamamaarmaan tahay in la helo qof Database Administrator ah oo isagu hadhow programme-ka cusub maamula. Waaxda IT-gu waxay soo jeediyeen in aniga la ii soo tababbaro inaan noqdo Database Administrator-ka.
Maamulkii waaxda IT-ga, oo uu ka mid yahay Faarax, oo isaga laftiisu Hindiya wax ku soo bartay, ayaa waxay Guddoomiyihii u sheegeen in Hindiya ay tahay meelaha dunida 3aad ugu horreeya ee laga baran karo xirfadda DBA ee ay Shirkaddu u baahan tahay. Sidaa darteed wuxuu ku taliyey in muddo kooban Hindiya la ii diro si aan u noqdo Maamulaha Datada shirkadda, taladaas oo ay Guddoomiyihii iyo Maamulkii sare ku qanceen aadna u soo dhaweeyeen. Aniguna dhankayga, maadaama uu guuxaasi jiray oo aan arkay in la ii heellan yahay, waan isu diyaariyay, waxaana la go’aamiyay in aan baxo sannadka cusub ee 2001.
Aniga oo aad u faraxsan ayaan ka soo dhoofay Somaliland, isla markaan aaan maalintii xigtay ka soo degay magaalada caanka ah ee Hayderabad ee gobolka AP ee India. Waxaan soo galay caalam cusub, oo si laxaad leh kor ugu socda. Waxaad isbeddelka ka dareemaysaa bulshada suuqa. Waxaa muuqata inay aqoonta cusub farsamada Technologyada safka hore ka galeen oo ay ka mid yihiin suuqyada waaweyn ee lagu xisaabtamo.
Waxaana xilliyada booqasho kooban ku yimi magaaladan Hyderabad ninka caanka ah ee iska leh shirkadda Micrasoft, Bill Gates, oo wakhtiyadaana ahaa qofka kowaad ee dunida ugu qanisan. Safarkiisuna wuxuu daarranaa muuqaalka soo jiidashada leh ee dhinaca Technologyada. Arrintani waxay daliil fiican u tahay in horumarka xawliga ku socda ee dunida dalkan iyo dadkiisa hareerta ka raaci karaan haddii ay dedaalaan.
Markii aan Hindiya tegay, waxaan ka galay machal lagu barto aqoonta IT-ga, (Aptech). Waxaanan ku dedaalay in aannu waqtiba iga lumin oo aan xoog saaro waxbarashadii la ii diray. Aqoon-korodhsiga la ii diray wuxuu ahaa in aan muddo kooban ku soo barto barnaamijka maamulidda Data-da ee D.B.A. Laakiin, waxaan go’aansaday in aanan keliya isku koobin Database Administrator. balse aan ku daro tababbarro kale oo dheeraad ah oo la xidhiidha aqoonta IT-ga.
Kaddib, in muddo ah ayaanan madaxaba kor u qaadin oo habeen iyo maalinba aan casharradaydii culays saaray si aan Hindiya ugala tago xirfad iyo aqoon la xidhiidha cilmigii la ii diray, oo berigaa dunida badankeedana laga xiisaynayey. Muddo ka dib waxaan qaatay shahaadada caanka ah ee MCDBA iyo MCP (Microsoft Certified Professional) oo ka mid ah koorsooyinka ay bixiso Shirkadda Microsoft. Dabadeed waxaan markiiba ku xigsiiyey inaan galo imtixaankii isku xidhka shebekadaha (Networking) oo aan ka qaatay MCSE (Microsoft Certified System Engineer). Iyadoo aan uga gudbay inaan ka qaato CISCO-CCNA oo caan ku ah heerarka iyo isku xidhka ama shebakadaynta aaladaha Technologyada.
Muddadii aan wax ka baranayey dalka Hindiya, run ahaantii aad baan u werwersanaa oo waxaan mar walba is weydiin jiray: Maxaad kula noqon doontaa shirkaddii iyo dalkii? Sidaa darteed, aad baan u dedaali jiray oo waqti iyo juhdi dheeraad ah ayaan ku bixin jiray sidii aan wax u baran lahaa. Waxaa Ilasoo hadlay kooxdii IT-ga oo ii soo sheegay in barnaamijkii cusbaa ee la bilaabay markii aan soo dhoofay ee loogu talo galay in aan maamulo la tijaabinayo oo la doonayo in aan imaaddo, Waan soo dhoofay. Markii aan imi waxaan u imi jawiga oo murugsan oo shirkaddii wadday barnaamijka iyo maamulkii shirkaddaydu ay ku muransan yihiin barnaamikii oo tijaabadii ka bixi waayay oo weliba muddo dhaafay, isla markaana ay lacagtii qabaan intii badnayd. Muran ka dib barnaamijkii muu tamarin ee waxaa loo aqoonsaday in aannu la jaanqaadayn shirkadda. Maadaama oo farsamada Technologyada dunidu xawli ku socotay, intii barnaamijkan lagu mashquulsanaa waxaa bilaabmay barnaamijyo Internet-ka ku shaqeeya(online), markaa ciladda jirtey waxaa wehelinayay in laga hiyi kacsanaa barnaamijka oo maamulkii ka jeestay.
Markii barnaamijkii fashilmay ninkii waday, oo ahaa Faarax, isaguna wuu iska casilay shaqadii oo waxaa nagu bannaanaatay kaalintiissii. Aniga oo cusub ayaa la ii magacaabay madaxa waaxda IT. Anigoo wax yar joogay oo aan weli meeshiiba la qabsan. ayaa maamulkii shirkaddu iila yimaadeen barnaamij cusub oo shirkad xarunteedu tahay Dubai u samaynayso shirkadda. In kasta oo aanan talo ku lahayn haddana waxaan la sii waday barnaamijkii maadaama oo shirkaddu baahi weyn u qabtay inay hesho barnaamij hawlaha shirkadda ku filan.
Nidaamka shirkadda loo soo iibiyey ayaan xoogga saaray bal sidii aan uga shaqaysiin lahaa. Muddo dhawr bilood ahna waxaan isaga daba noqonayey ama aan inta badan ku sugnaa Dubai iyo Jabal Cali. Aniga iyo nin kale oo shirkadda xisaabiye ka ahaa ayaa na loo xilsaaray in aannu Systemka ka shaqaysiinno. Kaddibna qaybo badan oo Systemkii ka mid ahaa ayaannu beddelnay si aannu ugu sargoyno baahiyaha Shirkadda. Waxa aannu haswshii riixnaba, markii aannu soo gaadhnay heerkii hirgelinta (implementation stage) oo aannu doonaynay in aannu Systemkii kaga shaqaysiinno, nasiib darro Systemkii wuu shaqayn waayey oo wuu fashilmay waxaanan kala kulannay shiddo iyo mashaqo badan.
Markii uu Systemkii fashilmay, aniguna aan tirsanayo in aan taladaydii la qaadanin oo programme-kii la soo iibiyey dhakada la igaga keenay, ayaan maalin maalmaha ka mid ah shirkaddii Dahabshiil ka qaatay fasax yar oo gaaban. Kaddib waxaan tegay London, anigoo run ahaantii aad u niyad-jabsan maadaama Systemkii uu noo shaqayn waayey, aniguna aanan taladiisii waxba ku lahayn. Markaan fasaxii muddo labo toddobaad ah ku jiray, anigoo ku sugan London waxaan la soo xidhiidhay maamulkii shirkadda, gaar ahaan guddoomiyhii iyadoo aan la socodsiinayo in aan doonayo in aan shaqada ka tago. Hase ahaatee, guddoomiyihii igama aqbalin, wuxuuna igu yidhi bal horta aynu isugu nimaadno Dubai. Intaa ka bacdi, waxa aannu maalintii dambe London iska soo raacnay maamulihii guud ee shirkadd (CEO) Cabdirashiid, dabadeedna waxa aannu tagnay dalka Suuriya. Bal qabsoo weli Systemkii baa sidii baadi-goob loogu jiraa, halkaana Suuriya waxa aannu ugu tagnay oo kula kulannay qolo kale oo shirkadda ka tirsan oo System kale baayacaya, waxa aannu uga sii gudubnay Dubai. Markii aannu tagnay Dubai, waxa iyaguna halkaa sii joogay guddoomiyihii iyo maamulkii sare ee shirkadda. Berigaa waxa si weyn loogu hawlanaa olole ah sidii shirkadda Dahabshiil dib-u-habayn maamul (Management Reform) loogu samayn lahaa ama loo casriyeyn lahaa, waxana loo soo kiraystay shirkad la talineed (consultant company) oo la odhan jiray Heriton oo uu hoggaan ka ahaa Cabdiraxmaan Xasan Cawl, oo khibrad maamul oo gundheer lahaa, si ay shirkadda ugala taliyaan hawlahii baaxadda lahaa ee hor yaallay.
Maalintii dambe ayuu ninkii la taliyaha ahaa isugu kaayo yeedhay intii maamulka shirkadda loo qorsheeyay Shangri-La Hotel (waa Albeerko caan ah oo Dubai ku taal). Wuxuu nagala hadlay qaabka ugu habboon ee Shirkadda Dahabshiil dib-u-habayn xagga maamulka ah loogu samayn lahaa. Hadalkii koobnaa ee uu la taliyuhu soo jeediyey kaddib, qoladii maamulka sare ayaa hadalkii la wareegay, gaar ahaan guddoomiyihii ayaa gudbiyey cabatinkii ugu horreeyey wuxuuna ka hadlay caqabadihii shirkadda ka haystay barnaamijka-IT-ga, isagoo yidhi “Ugu horrayn waxa aannu jecelahay in aannu kula socodsiinmo in shirkadda ay laba Barnaamij oo hore ka fashilmeen, waxana aannu ku guul-darraysanay in aannu labadaa System hirgelinno. Maamulkii guud waa kan, maamulihii waaxda IT-ga ee shirkadduna waa kan, ilaa haddana waxa aannu u caddilannahay barnaamijkii shirkaddu ku shaqayn lahayd. Haddaba, bal horta inta aynaan ka wada hadal sidii shirkadda Dahabshiil loo casriyeyn lahaa ama dib-u-habayn maamul loogu samayn lahaa, maxaad nagula talinaysaa ama aad nagala qaban kartaa caqabadaha naga haysta qaybtaa aan ka hadlay?”
Cabdiraxmaan Cawl ayaa hadalkii la wareegay, waxana uu guddoomihii iyo maamulkii sare ee shirkadda weydiiyey su’aalo u badnaa yool-baadh, nuxurkooduna uu sidan ahaa:
“Ninkani ma yahay Maamulihii waaxda IT-ga ee Shirkadda?” Guddoomiyihii wuxuu ku jawaabay :”Haa, waa isagii.”
“Yaa masuul ka ahaa labadii System ee Shirkadda hore uga fashilmay, ma maamulaha IT-ga mise cid kale?”
Guddoomiyihii wuxuu ku jawaabay: “Mayee isagu masuul kama ahayn ee fikirka Barnaamijka iyo go’aanka lagu soo iibiyeyba wuxuu ka yimi xagga Maamulka sare ee Shirkadda!”
Ninkii la taliyaha ahaa ayaa guddoomiyihii su’aal kale u celiyey, wuxuuna ku yidhi: “ Idinku (maamulka sare) miyaad tihiin dad IT-ga aqoon u leh?” “Maya”, ayaa lagu jawaabay.
Markii cabbaar hadalka la iku celceliyay wuxuu yidhi lataliyihii “Qoladiinan maamulka sare ee shirkaddu, waad qaldanteen, waxa qummanayd inaad wax weydiisaan maamulaha waaxda IT-ga oo aad shaqadiisa uga hadhaan! Imika iyo haatan, waxaan talo ahaan idiinku soo jeedin lahaa in qoladiina maamulka sare aad ninkan waaxda IT-ga masuulka ka ah masuuliyadda shaqada aad faraha uga qaadaan. Isagu ha soo iibiyo Barnaamijka iyo Programme-ka uu u arko inay hawlaha shirkadda anfacayaan. Wixii guul iyo guuldarro ah ee barnaamijka ka yimaaddana aynu isaga dhabarka u saarno; haddii uu barnaamijku guuldarraystana aynu dabadeed isaga qoorta u saarno (shaqada ka erino)! Laakiin idinku, maadaama aydaan IT-ga aqoon u lahayn, ninkan shaqadiisa faraha uga qaada!”
Siday runtu tahay, hadalkii uu yidhi ninkii la taliyaha ahaa ee ay shirkaddu u yeedhatay wuxuu ahaa hadal aniga ii noqday hiil iyo gurmad weyn oo aan u baahnaa.. Wuxuu ahaa hadal iga dulqaaday niyad-jabkii, wahabkii iyo werwerkii iga haystay xagga shaqada. Wuxuu ahaa hadal i siiyey dhiirrigelin weyn oo i siiyay dardar cusub oo aan kaga midho dhalin karo shaqadayda. Shirkadii Heriton, waxay samaysay waxyaalo badan oo isbeddel dhinaca maamulka ah iyo qorshe ballaadhan oo dib habaynta maamulka ah. Intaa ka bacdi, guddoomiyihii iyo maamulkii sare ee shirkadda waxay si wada-jir ah iigu yidhaahdeen hadda laga bilaabo si madax-banaan inaan u raadiyo Barnaamijkii shirkadda ka anfacaya xallinta caqabadahii horyaallay.
Waxaa baadi-doon u galay sidii aan u heli lahaa barnaamij shirkadda anfici kara, kana kaalmeeya baahiyaha iyo shaqada. Waxaa raadintii barnaamijkaa si laxaad leh noogala hawl-galay nin la yidhaahdo Maxamed Carraale oo shirkadda la shaqaynayay. Xilligu waa xilli uu suuqa IT-gu aad u xaami yahay, Barnaamijyadu waa qaalli, waxana la baayacayaa barnaamijyo uu qiimihoodo gaadhayey $1.2 Milyan, Barnaamijyo ugu jaban ee suuqa yaalayna wuxuu ahaa $400,000. Waxa si gaar ah dabada uga riixayay xawaaladda UNDP oo xilligaa ku hawlanayd sidii barnaamij lagu kalsoonaan karo loogu samayn lahaa dhammaan xawaaladaha, waxaana ay hadal hayeen PayQiuck barnaamij la odhanayey. Sidoo kale waxaa jiray nin Cabdisalaan la odhanayay oo Soomaali ah oo dhawr shirkadood oo xawaalado ah u sameeyay barnaamij, ninkii ayaannu la fadhiisannay aniga iyo qaar ka mid ah kooxdii maamulka wuxuuna noo soo ban dhigay barnaamij yar oo aad u jaban ilaa $40,000 qiimihiisu ahaa, oo weliba Internet-ka ku shaqaynaya (Online). Waxaan rejaynayaa in ay ahay July 2006 ayaan ku qancay barnaamijkii koobnaa, ee uu noo soo bandhigay ninka Soomaaliga ahi, maamulkiina waa ku wada qanacnay, waxaanan ka hawlgalay sidii aan u hirglin lahayn.
Xilligu waa xilli ay dunida oo dhammi u gudubtay adeegsiga Internet oo aad u soo shaac baxay. Barnaamijkii waanbu iibsannay. Waxa aannu u gudubnay heerkii hirgelinta barnaamijka iyo in aannu kaga shaqaysiinno. Laakiin, waxa aannu kala kulanay tacab iyo rafaad badan, sababtuna waxay ahayd; Barnaamijkii ay Shirkadda hore ugu shaqaynaysay wuxuu ahaa barnaamij ku shaqaynayey habka Bilaa Internetka (Offline), laakiin kan cusubi wuxuu ku shaqaynayay Internet-ka (Onlne system) oo isticmaalkiisu nagu cusbaa. Waxa xusid mudan, laga bilaabo aakhirkii 2003-tii ilaa dhammaadkii 2005-tii shirkadda Dahabshiil waxay si weyn ugu mashquulsanayd sidii ay u heli lahayd isla markaana u hirgelin lahayd Barnaamij ku habboon qaab shaqadeeda iyo baahiyaha gaarka ah ee macaa-miisheeda oo Internet-ka ku shaqaynaya. Arrintu si kastaba ha ahaatee, dabayaaqadii 2006-tii ayaannu ku guulaysanay in aannu barnaamijkii si buuxda oo dhammaystiran u hirgelino oo uga shaqaysiinno.
Waaxdii Operation-ka ee Shirkadda Dahabshiil waxay ahayd waax muhiim ah oo maamul ahaan la siman waaxdii IT-ga ee aan maamulaha ka ahaa. Waaxda Operation-ku waxay ka masuul ka ahayd diyaarrinta liiska magacyada dadka lacagta diraya iyo kuwa loo dirayo, iyo weliba (iyagoo adeegsanaya fax ama e-mail, Fooniye) inay liiska magacyada u kala dirto meelaha iyo xarumaha ay khusayso ee ku kala baahsan dhammaanba dacallada dunida. Waaxdii Operation-ka waxa madax ka ahaa Axmed Warsame Ducaale oo ahaa ninkii shaqada fooniyaha Yiroowe iga qoray, runtiina waa nin aad u qiimo badan. Balse waxay muddo badanba ku soo shaqaynayeen Barnaamij ay barteen oo bilaa Internet ah.
Sida qaalibka ah, bini’aadamku wax kasta oo noloshiisa ku cusub ama aannu hore u arki jirin, uma sahlana, wuxuu isku dayaa inuu iska-caabiyo ama aannu aqbalin. Gaar ahaan dadka ku ab-tirsada isirka-Soomaaliga, badankoodu waxay qaba-timeen hab-dhaqanka ah arki-jiray-doone; aad bayna ugu adag tahay aqbalaadda iyo la-qabsiga haddii wax ay hore u yaqaaneen lagu beddelo wax kale oo ku cusub.
Labadii waaxood ee ugu muhiimsanaa ee shaqada iyo xisaabaadka (Operation/Accounts) waxa aannu kala kulanay iska caabin laxaad leh oo xaga isbeddelkii aan wadnay ee barnaamika ku saabsan, manay hawl yarayn in laga hirgeliyo laamaha shirkadda ee debada iyo gudaha oo saddex boqol ka badan kuna filiqsan aduunyada oo dhan, hase ahaatee waxa aannu ugu danbayn ku soo gebagebayay guul in aan ku dhammaystiro oo lagu shaqeeyo iyadoo Barnaamijkiina aan wax badan ku kordhinay kana beddelay oo aan waafajinay dabeecadii shaqada shirkadda Dahabshiil.
Waxaan shaqadan ka bartay, farsamo kasta iyo barnaamij kasta oo aad diyaarisaa waxay guushiisu ku xidhantahay hirgelintiisa (Implementation) Waxa weli xasuustayda ku sii dhigan xaaladdii adkayd ee maalmahaa taagnayd taas oo aan u adkaysanay ugu danbayna guul ku dhamaatay. Sidoo kale in ay la xisaabtanka maamulka ay muhiim u tahay dheellitirka masuuliyada iyo Awoodda.
Shirkadii aan la shaqayn jiray ee Dahabshiil oo xilligaa qorshaynaysay inay furto Bank ayaa la iigu yeedhay inaan shirkadda kala taliyo Coputers-ka iyo barnaamijka Software-ka markaa waxaa haloosigiisa lagu jiray oo la doonayey in loo sameeyo Dahabshiil Islamic Bank, waxaana aannu Djibouti isu raacnay madaxdii shirkadda badankoodii. Dood dheer oo maamul ka dib 04|06|2009 waxaa lay xil saaray in aan noqdo madaxa mashruuca barnaamijka iyo qalabka Dahabshil Bank ku shaqaydoon kaas oo xilligaa uu socday qorshihii lagu furayay. Ninkii hoggaaminayay mashruuca Baanka, Cabdiraxmaan Cawl ayaannu la yeelanay kulankii ugu horreeyey, kaddibna waxay noo soo ban-dhigeen saddex barnaamij oo kala duwan oo ay xusheen (short listed), oo ay ku qanceen mid qiimahiisu ahaa 1.8 Milyan US$. Siday xaqiiqdu tahay, waxaan u arkayey in barnaamijyadaasi ay aad u qaali yihiin, kaddibna dood kulul ayaa na dhex martay.
Fikraddii ay wateen hoggaankii mashruuca Dahabshiil Islamic Bank iyo kooxdii farsamada waan ku qanciwaayay, waxaanan soo jeediyay in aanay suurto-gal ahayn in barnaamijku uu qiimihaa uu taagan yahay 1.8 Milyan Dollar, lagu qaato balse aan aaminsanahay in wax ka yar lagu heli karo. Falanqayn na dhex martay maamulka guud ee Shirkadda Dahabshiil kaddib, waxa la igu yidhi: “Adigu qiime kaa ka jaban ma ku keeni kartaa?”
Dabadeedna waxaan ugu jawaabay: “Haa, qiime intaa ka jaban baan Barnaamij ku keeni karaa.” Dabadeed waxa la igu yidhi: “Barnaamijka waxa la doonayaa in muddo 3 bilood ah lagu hir-geliyo, ee adigu muddo intee leeg baad ku keeni kartaa?” waxaan ku idhi “Aniga muddo 3 todobaad ah ii qabta inaan ku keeno xogtii barnaamijka oo dhammaystiran. Haddii aan qorshahaa ku guulaysan waayana, waxaan faraha uga qaadayaa kooxda hadda qiimaha qaaliga soo bandhigay”
Intaa kaddib, waxaa la igu yidhi: ”Miisaaniyad intee leeg ayaad ku talinaysaa ama qiime intee leeg ayaad barnaamijka ku keeni kartaa?” “waxaan u sheegay $800,000 USD!!” waana layla qaatay.
Waxaan galay baadhitaan dheer oo xagga Internetka ah taas oo saacado baddana aan ku bixiyay, aakhirkii waxaan helay Shirkad Ingiriis ah oo ku takhasustay bangiyada Islaamiga ah buugna ka qortay barnaamijyada ama software-da loogu tala galay in lagaga shaqeeyo Bangiyada Islaamiga ah, waxaan buuggii ka iibsaday Internetka. buuggii markaan akhriyey, waxaan ka helay ilaa iyo 32 shirkadood oo iibiya software-da loogu tala galay in lagaga shaqeeyo Bangiyada Islaamka.
Waxaan ku dhaqaaqnay inaan systemkii raadinno, aniga iyo nin la odhan jiray Eng. Maxamed-Khadar (oo dhintay a.h.u.n.), oo run ahaantii ahaa nin aad iyo aad u qaaliya oo u qiimo badan waxaanannu u safarnay Dubai. Kaddib waxa aannu kulamo la yeelanay qaarna emaillo u dirnay shirkadihii iibinayey barnaamijyada banigiyada Islaamiga ah ee aannu raadinaynay, waxa aannu la bilawnay gorgortan. Dhinaca kale, qoladii markii hore ku hawlanayd ee gacanta ku haysay Bangiga Dahabshiil ayaa waxaannu ka codsannay in ay nagu soo wareejiyaan saddexdii shirkadood ay ka xusheen (short listed companies) si aannu dib ugula gor-gortanno (re-negotiation) qiimihii ay ku iibinayeen systemkii aannu doonaynay, waxay nagu soo wareejiyeen arrintii aannu ka dalbannay, balse iyagoo ay nala yaabban yihiin waxayna nagu yidhaahdeen: ” Waar niman yohow hawshan aqoon uma lihidin oo rag badowa ah ayaa tihiine Barnaamijyada aynu doonayno waa qaali dunidana kama joogo intaa aad idinku leedihiin waanu ku soo helaynaa, wax ka yar 1.8 Milyan oo Dollar ku helimaysaane waad riyoonaysaan!!”
Arrintu si kastaba ha ahaatee, xidhiidhadii aannu samaymay dhawr shirkadood ayaa nooga soo jawaabay, mid walbana qiimo ayay noo sheegtay. Saddexdii shirkadood ee hore loo xushay (short listed companies) waxaannu bilawnay in aannu gorgortan la galno. labo ka mid ahi midba qiimo ayuu noo sheegay 1.7 ilaa 1.4 Milyan, markii aannu sii baayacnay, markii dambena wuxuu ku soo dhacay ilaa $950,000. Shirkaddii markii hore la soo xushay ee lagula heshiiyey 1.8 Milyan USD ayaannu sidoo kale bilownay in aannu la galno gorgortan dambe, ugu dambayntiina waxaannu soo gaadhsiinay $1 Milyan USD.
Ugu danbayn waxa aannu soo helay ilaa 8 shirkadood oo qiimayaal kala duwan oo ay ugu sarayso hal milyan oo Dollar uguna hoosayso shirkadda qiimaheedu ahaa $240,000 iyadoo inta kalena u dhexayso labadaa oo qiima kasta ay leeyihiin ayaannu u soo gudbinay maamulkii sare ee shirkadda iyo baanka. Markii dambe waxaannu qaadannay shirkaddii ugu hoosaysay ee ahayd $240,000 taas oo laga lahaa waddanka Sudan, waxay shirkadda Dahabshiil u ahayd faa’iido aad u weyn in aannu u badbaadinay lacag milyan iyo badh ka badan. Waxaan ka bartay arrintan awoodda ay maamulka siiso suuq-raadinta, baayactanka, miisaaniyad iyo wakhti cayiman in loo asteeyo raadinta, maamulidda iyo hirgelinta mashaariicda. Sidoo kale gorgortanka oo aad muhiim u ah iyo qiimaha uu maamulka u leeyahay waxaan kaga hadli doonaa cutubyada kale.
Iyadoo aan muddo ka maqnaa shirkadda oo xilligii aan ku biiray Komishinka Doorashooyinka aan shaqada ka tegay ayaa markii aan muddo sannad ah ka sii maqnaa shaqadii Komishinka balse aan shirkadii Dahabshiil ee aan u shaqayn jiray weli ka ag dhowahay ayaa maamulaha guud ee shirkadda (CEO of Group) oo ahaa Cabdirashiid Maxamed Siciid 12|July|2009 ayuu ii magacaabay in aan kula shaqeeyo Lataliye, waxaanan muddo kula shaqaynayay kana kaalinayay shaqada guud ee shirkadda iyo marba wixii la iga baahdo iyadoo xilligaa la igu qoray in aan ka hawl galo xafiiska guud ee Dubai.
Waxan jecelahay in aan xuso heerkii aan shaqada ka soo bilaabay oo ahayd makhaayadda cuntada oo aan ku shaqaynayey anigoo ah muruq-maal, shaqada Fooniyaha ee haddana maamulkiisii la wareegay, waxaa ii xigtay karraani aan xafiiska Hargeysa kaga bilaabay, maamulaha Hargeysa-B, khasnajiga guud, kaaliyaha IT-ga, maamulaha IT-ga, Project manager, Lataliyaha CEO & xubin Board-ka, oo aan ku soo gebagebeeyay Maamulaha guud Somtel-CEO. waa shay aad u qiimo badan in aad maamulka meelo badan oo kala duwan ka soo shaqayso waxaanay kuu siyaadinaysaa khibrad iyo garasho siyaado ah.
Shirkadda Dahabshiil waxay ahayd shirkad aan muddo badan ka soo shaqaynayey oo aad la iiga jeclaa, xilal kala duwanna aan ka soo qabtay. Dhammaadkii sannadkii 2009 ayaa la ii magacaabay in aan noqdo maamulaha guud ee shirkadda telefoonnada Somtel CEO. Waxa xusid mudan in shirkadda SOMTEL ay ilaa iyo 2004-kii qorshaynaysay oo ay ku hawllanayd sidii ay ugu wareegi lahayd habka GSM-ka ee telefoonnada Mobilka ah, qalabkii ay shirkaddu ku hawl-geli lahaydna waa la soo iibiyey oo badankiisu diyaar buu ahaa. Balse shirkaddii SOMTEL taabo-gal may noqonin kumanay guulaysan inay gasho suuqa. Shirkaddii Somtel bilawgii bishii January 2010 ayaa si rasmi ah la iigu wareejiyey oo aan ka noqday maamule guud (CEO), anigoo weli ka mid ah gudidda guud ee shirkad (Board of Directors) xilkaa iyo masuuliyaddaa cusub ee aan qaaday waxay ii ahayd halbeeg iyo bartilmaameed cusub oo aan ku beegsan karo guulo kale, waxanan naftayda ku qanciyey haddii aan ku guulaysto inaan shirkadda SOMTEL guul gaadhsiiyo inaan gaadhi karo guul kale oo intaa ka badan isla markaana ay kor u qaadi karto himilooyinkayga mustaqbalka. Bar-tilmaameed waxa ii ahayd bal sidii aan SOMTEL si rasmi ah ugu furi lahaa ee aan uga shaqaysiin lahaa maadaama shirkadda ay muddo ummaddu adeegeeda aad u naawilayeen.
Waxa xusid mudan in ay jireen hawlo baaxad leh iyo caqabado waaweyn oo shirkadda SOMTEL horyaallay, kuwaas oo u baahnaa in si dhab ah loo waajaho waxna looga qabto. Hawlaha ugu culculus ee shirkadda horyaallay waxa ka mid ahaa:
SOMTEL: Waxa laga haystay Suuqa Mobillada GSM-ka: Caqabadda ugu weyn ee shirkadda hortaallay waxay ahayd xagga ka qayb-galka suuqa Mobillada GSM-ka. Inkastoo shirkadda SOMTEL ay ilaa iyo 2004-kii ku hawllanayd sidii ay ugu wareegi lahayd ee ay uga qayb-gali lahayd suuqa GSM-ka ee Mobillada, haddana SOMTEL kumay guulaysanin inay ka qayb gasho tartanka GSM-ka, wax saamayn ah ama saami ah midnaba kumay lahayn adeegga suuqa telefoonnada gacanta.
Suuqa waxa haystay Shirkad weyn oo la yidhaa Telesom oo suuqa telefoonnada gacanta ku haysay in ka badan 70-80%. waxa ii muuqatay in ka-qaybgalka suuqu aannu mid sahlan ahayn. Sidaa darteed, hawsha ugu muhiimsan ee Shirkadda SOMTEL hortaallay waxay ahayd sidii ay Shirkaddu isugu diyaarrin lahayd ka qayb-galka adeega suuqa GSM-ka ee Mobillada; ha noqoto xag farsamo, xag ganacsi, xag maamul iyo iwm.
SOMTEL: Shirkad fadhiida oo haddana kharsh ku socdo: Caqabadda kale ee iyana jirtay waxay ahayd shirkadda SOMTEL oo aan shaqaynin wax macaash ahna aan soo saarin, haddana uu kharash badani ku socdo. Shirkadda waxa ka shaqaynayey oo ay soo kiraysatay 8 nin oo ajaaniib ah oo lagula heshiiyey inay shirkadda ka shaqeeyaan muddo sannad ah, iyagoo qaadanayay lacag ku dhow hal milyan Dollar sannadkii, waxa dheer kharashaadka kale oo aan iyana hal milyan oo kale ka yaraanayn. Waxa ii muuqatay in shirkaddu xataa haddii lagu guulaysto oo la kiciyana aanay in muddo ah wax macaash ah soo saari doonin oo ay u baahan tahay kabis. Sidaa darteed, waxaan gar waaqsaday in dhimista kharashku ay muhiim ii tahay.
Waxaan xoogga saaray in aan abuuro hannaan muumul oo wada shaqaynaya, isku ujeedo iyo yool ku wada socda, kuwaas oo leh isfaham iyo xidhiidh joogto ah. Cid kasta oo aan u arkay in ay caqabad ku tahay wada shaqaynta maamulka waxaan isku dayay in aan si uun u maareeyo inta shaqadu isku dubbadhacayso, waxaana si wanaagsan u wada jaan-qaaday intii badnayd maamulka heerka uu doono ha ahaadee. Xagga shaqaalaha, hawl kasta oo la qabanayo nooc kasta oo ay tahayba, waxaan aaminsanahay in aanay ka maarmayn hoggaamin toosan, shaqaale u darban oo u diyaarsan shaqadooda. Haddaba, si aan uga midho-dhaliyo hawlaha baaxadda leh ee Shirkadda SOMTEL, waxaan lagama maarmaan u arkay inaan diyaariyo, habeeyo iskuna dubbarido dadkii ila wadi lahaa ee igala shaqayn lahaa hawlaha shirkadda heer kasta iyo waax kasta oo ay yihiinba.
Waxaannu muhiimad siinnay fulinta hawlaha shaqo, samaynta istaraatiijiyad tilmaamaysa abbaarta iyo yoolka shirkadda, dejinta Hiraalka iyo higsiga shirkadda ee mustaqbalka. Iyadoo la raacayo habraaca maamul, ee Qorshaynta, Habaynta, Hoggaaminta iyo Ilaalinta dadka iyo hantida shirkadda.
Xag Farsamo inaan ogaado sida ugu sahlan ee farsamo ahaan adeegga Shirkadda SOMTEL loo bilaabi karo ama loo shaacin karo. Arrinta muhiimka ah ee i hortaallay waxay ahayd sidii aan shirkadda SOMTEL farsamo ahaan (technically) ugu diyaarrin lahaa, isla markaana aan uga gun gaadhi lahaa heerka ay shirkaddu farsamo ahaan taagan tahay, waxa ka dhiman iyo wixii loo baahan yahay si ay shirkaddu farsamo ahaan lugaheeda ugu istaagi karto uguna diyaar-garoobi karto ka qayb-galka tartanka suuqa. shaqaalaha ama in loo baahan yahay in la dhimo wixii shaqaale dheerad ah ee ay shirkaddu ka maarmi karto.
Ha noqoto xag ganacsi ama ha noqoto qaabkii loo suuq-gayn lahaa adeegga iyo badeecadda shirkadda SOMTEL, waxaan arrin muhiim ah u arkayey in shirkadda loo diyaariyo hannaankii ganacsi ee ay kaga qaybgali lahayd suuqa GSM-ka.
In kasta oo ay jireen isku dayo iiga horreeyey maamulka oo aan ku guulaysan inay suuqa la qaybsadaan shirkadaha kale, haddana waxaan u arkayay in saami fiican laga heli karo suuqa, waxaan muddo kooban ku guulaystay in aan helo 25% saamigii ganacsiga ee suuqa Telefoonnada. Wuxuu yidhaahdaa buugga, You can win “Winners do not do deferent things, they do things deferently” Intaa ka bacdi, waxaan u diyaar-garoobay furitaankii aan shirkadda si rasmi ah u furi lahaa waxaanan diyaariyey qaabkii iyo qorshihii shirkaadda loo furi lahaa iyo shaqaalihii ila furi lahaaba. Laakiin, waxa aan mushkilad kala kulmay qaar ka mid ah maamulkii shirkadda SOMTEL oo iyagu u ololeynayey inaan shirkadda la furin, maadaama ay aaminsanaayeen haddii shirkadda la furo inay fashilmi doonto, waxayna guddoomiyihii guud oo isla markaa ahaa mulkiilaha shirkadda ku qanciyeen fikirkii kalsooni-darrada ahaa ee ay iyagu rumaysnayeen. Maalintii dambe, markaan wax walba diyaariyey ayaannu u nimi guddoomiyihii guud ee shirkadda (aniga iyo Faarax oo ku-xigeen ii ahaa) oo aan ku war-galiney qorshaha iyo taariikhda rasmiga ah iyo maalinta aan shirkadda SOMTEL furi doono. Markaan qorshihii furitaanka u sheegay guddoomiyihii guud ee shirkaddu wuxuu ka muujiyey walaac xoog badan, wuxuuna aad uga werwerayay in furitaanka shirkadda haatan la furaa uu horseedi karo fashilaad.
Maadaama qaar ka tirsan maamulkii shirkadda SOMTEL ee aniga iga hooseeyey iyo guddoomiyihii guud ee shirkadda ee aniga iga sarreeyeyba ay fikirkaa qabaan, waxaan qaatay go’aan adag oo aan ku dhiiraday inaan ku qanciyo maamulka sare, kuna adkaysto furitaanka shirkadda. Waxaan guddoomiyahii shirkadda u sheegay in haddii ay wax dhalliil ah ama fashilaad ahi ay ka yimaaddaan furitaanka shirkadda SOMTEL, aniga ayaa qoorta soo dhiganaya. Haddii aan ku fashilmo shaqada waan iska casilayaa wixii khasaare ama sumcad-xumo ah ee furitaanka ka yimaadda anigaa dhabarka u ridanaya. Run ahaantii waxaan qaatay go’aan adag oo guushiisa iyo guul-darradiisuba ay is barkanaayeen, balse waxaan ku adkaystay inaan shirkadda SOMTEL si rasmi ah u furo. Kaddib guddoomiyihii guud ee shirkadda waxa na dhex martay dood dheer oo aad u adag, doodayda waxa gundhig u ahaa ama aan cuskanayey sababo, duruufo iyo caqabado shirkadda horyaallay oo loo baahnaa in si wada-jir ah wax looga qabto isla markaana fikir iyo talo midaysan lagu wajaho.
Kaddib waxaan guddoomiyihii ku idhi hadal uu nuxurkiisu ahaa sidan: “Guddoomiye, shirkaddan SOMTEL ee aad aniga madaxda iiga dhigtay waa shirkad fadhida oo aan shaqaynin, isla markaana aan wax macaash ah soo saarrin. Iyadoo, haddana aynu ku talo jiro in aan tartan kula galno shirkado kale oo waaweyn oo iyagu in muddo ahba suuqa-ganacsiga gacanta ku hayey ama hoggaaminayey. Shirkaddahaa iyaga ahi waxay tartan inagula galayaan macaash ay sameeyaan, halka aan aniguna madax ka ahay shirkad khasaare ku jirta maalin walbana kharsh burburisa oo uu albaabkeedu xidhan yahay oo aan waxba soo saarin, oo haddana mishiinadeeduna ay min koone ilaa koone daaran yihiin. Guddoomiye, waxaa aniga ii muuqata in haddii aan muddo sannad ah shirkadda SOMTEL sidaa ku sii wado, shirkaddu waxay gali doontaa kharash aan qiyaas lahayn wayna dumaysaa aniguna aakhirka waan ku ceeboobi doonaa. Sidaa darteed waxaan ku qancay inaan Shirkadda SOMTEL si rasmi ah u furo.”
Dooddaa dheer ee guddoomiyaha na dhex-martay ka dib, guddoomiyihii oo ahaana mulkiilaha shirkaddu wuu ii soo dabcay, wuxuuna ku calool-adaygay oo uu igu raacay inaan SOMTEL si rasmi ah u furo isagoo werwersan. Si aan qiyaas lahayn ayaan ugu farxay uguna diirsaday taageerada uu guddoomiyuhu ii muujiyey.
Waxa aannu samaynay furitaan sanqadh weyn oo dadka soo jiitay. Tusaale ahaan xafladdii furitaanka shirkadda SOMTEL ee ka dhacday Hargeysa, Hotel Maansoor waxay ahayd xafladdii ugu weynayd taas oo loo soo agaasimay si aad u heer sarraysa isla markaana lagu soo casuumay oo guud ahaanba kulmisay acyaantii iyo Indheer-garadkii ummadda Somaliland shacab iyo dawladba. Bandhiggii xafladihii furitaanka ee shirkadda SOMTEL waxay noqotay dhacdo la yaab leh oo indhaha iyo dhegaha bulshada reer Somaliland si weyn u soo jiidatay isla markaana suurto-galisey in durbadiiba bulshadu shirkadda ka qaadato aragti, muuqaal iyo fikir wanaagsan kaasoo kor-u-qaaday magacii iyo sumcaddii shirkadda. Habeennimadii markii noocyada kala duwan ee war-baahinta laga soo daayey in adeegyada GSM-Mobile-ka ee shirkadda SOMTEL laga furay dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalka min daraf ilaa daraf, shirkadihii Is-gaadhsiinta ee uu tartanku naga dhexeeyey wuxuu bandhiggii furitaanku ku noqday dhul-gariir iyo u qaadan waa ay rumaysan waayeen siday arrintaasi u suurto gashay iyo xawliga aannu ku dhaqaaqnay.
Waxaan ka bartay arrintan baahida qofka wax maamulayaa u qabo Farsamooyinka maamul (Management Functions) ee qorshaynta, nidaaminta, shaqaalaynta/ka shaqaysiinta, isku-xidhka iyo ilaalinta maamulka, sida ficil ahaan loogu adeegsado shaqooyin maamul ee ay hawsha u sahlaan.
Waxaan jecelahay inaan dib u yara milicsado oo aan xuso jawigii farxadda lahaa, niyad-samidii iyo dhoolla caddayntii uu Guddoomiyaha guud igu qaabilay maalin ka bacdi Xafladdii furitaanka Shirkadda SOMTEL. Qiyaastii saacaddu waa 2:30-kii ilaa 3:00-dii galabnimo, goobtuna waa isla xafiiskii ay aniga iyo guddoomiyaha maalin ka hor nagu dhex martay sheekadii furitaanku oo nuxurkeedu ahaa: “Shirkadda waan furayaa!” iyo “Mayee aan hubinno oo waxaan ka werwersanahay inaynu ku fashilanno!” guddoomiyaha shirkaddu wuxuu goob-joog iyo markhaatiba ka ahaa qaabkii ay u dhacday xafladii la yaabka lahayd ee furitaanka shirkadda SOMTEL iyo riyaaqii iyo rayn-rayntii ay bulshadu kaga dareen celiyeen iyadoo farsamo ahaan shaqadii shirkaddu si fiican u dhaqaaqday, taas oo markiiba macmiishii safaf usoo gashay dalabka adeeggii shirkadda, taasina waxay wax weyn ka beddeshay jawigiisa iyo dareenkiisaba. Markiii aan soo galay xafiiskii, waxa guddoomiyaha wajigiisa ka muuqatay farxad iyo qosol, inta uu ii sarakacay ayuu si niyad-sami ah ii salaamay oo uu ii gacan qaaday, kaddibna wuxuu igu yidhi ereyo bogaadin iyo dhiirri-gelinba lahaa: “Wallee geesi baad tahay, anigu shalay xafladdii furitaanka ka hor, aad baan u baqayey oo aad baan uga werwersanaa dhinaca ay arrintaasi u dhici doonto.”
Qof ahaan, himilada i hagtaa waxay mar walba ku salaysan tahay in go’aan qaadashada adagi ay lagama maarmaan u tahay guusha uu qofku hiigsanayo. Wuxuu yidhi madaxweyne maraykanka ee Franklin D. Roosevelt “only thing we have to fear is fear itself”.
Shirkaddii way dhaqaaqday intii loogu talogalay in aannu ku gaadhno laba sannadood waxa aannu ku gaadhnay shan bilood oo keliya waxaanay wakhtigan shirkadii ka mid tahay shirkaddaha waaweyn ee ka hawl gala geeska Afrika. Sidoo kale, warbixintii rubuc sannadka ee ugu danbaysay ee aan ka horjeediyey maamulkii sare iyo boodhka guud ee shirkadda ka hor intii aanan shaqada ka tegin, waxaan kaga warbixiyey korodhka iyo koboca ku yimid tiradii macaamiisha shirkadda SOMTEL, kuwaas oo si aan caadi ahayn u kordhay, dabcan iyo baahiyihii jiray oo aan u soo bandhigay.
Maxamed Siciid Ducaale oo ahaa mulkiilaha shirkada Dahabshiil iyo Somtel oo aanu muddo soo wada shaqaynay, waa hogaamiye ganacsi oo hal abuur leh, isla markaana ka midho dhaliyay ganacsiga kala duwan, kana gaadhay in uu noqdo maalqabeen derejo fiican ka jooga heerka dhaqaale ee dadka Soomaalida, waxaanan ka xusi karaa intii aannu wada shaqaynaynay waa shakhsi ma daale ah xaga shaqada, waxaan xasuustaa qancinta iyo ilaalinta macmiishiisa sida uu ku ahaa, hadii qof 100 Dollar loo soo diray oo khidmada laga uu ka qaatayna tahay shan Dollar, oo ay macmiilka ka khaldanto lacagtii, muu eegi jirin faa’iidada uu ka helayo ee waxaa laga yaabaa in uu 100 Dollar oo kale ku kharash gareeyo sidii uu u sixi lahaa macmiilkana u qancin lahaa isaga oo wax faa’iido ah ka helin.
Waxaanan aaminsanahay inay muhiim tahay in qofku soo maro jaranjarada shaqada oo aannu xagga sare kaga soo boodin, taasina waxay baraysaa hannaanka wada shaqaynta bulshada (Team work) Sidaa darteed, qofkii Rabbi ugu deeqo, xilka iyo derajadu heer kasta oo ay yihiinba, waxaa muhiim ah inuu ogaado madaxnimada inay ka horrayso in aad ogolaato in madax-laguu noqdo. “Qofka madaxda ah waxaa lagu qiyaasaa sida uu ula macaamilo ee u qiimeeyo dadka ka hooseeya ee laguma qiyaaso sida uu ula macaamilo dadka ka sareeya”
Waxaan leeyahay akhristaha buuggan haddii aad wakhtigan ladantahay balse aad nolosha ka soo martay derejo hoose, waxaad naftaada ku samaysay horumar, bulshadaadana waxaad u horseedday in aad tusto in ay horumaraan, ceebna ma aha in aad wax ka qortaa oo qaar baa halkii aad shalay joogtay maanta ku sugan oo ay cilmi iyo dhiirrigelin u tahay dhacdooyinkaagii noloshu ama qaar aan soo marin oo nolosha barwaaqo wada moodaaya ayaad u faa’iidaysay oo ay cibro iyo xasuus u tahay, oo aad u sheegtay in nolosho aanay wada barwaaqo ahayn. Halbeegga horumarkana looma soo qaato ladnaan ladnaan kale looga gudbay, badanaa waxaa lagu soo qaataa faqri barwaaqo looga gudbay, shaqo hoose oo shaqo sare looga gudbay iyo dhinacyada horumarka bulshada ee kale ee la gaadhay.
Tags: Mudalab Ilaa Maamule shirkadeed (CEO)
Next post Sallaankii Siyaasadda
Previous post Marxaladihii Waxbarashada iyo Sicto College